လက်သင့်ရာ ထောက်ပံ့ကြေးပေးနေတဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေကို တိုင်လို့ရပြီ – Daily Feed MM
ရသင့်ရထိုက်သူတွေ မရဘဲ ရနေကျသူတွေပဲ ထိပ်ဆုံးက ရနေတာဆိုရင် တိုင်လို့ရပါပြီတဲ့…. ဗျာကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေက ဆင်းရဲနွမ်းပါး လက်လုပ်လက်စားတွေ ကနိုင်ငံတော်ထောက်ထောက်ပံ့ကြေးကို အပတ်တိုင်းမရဘဲတစ်ပတ်ခြားစီ အလှည့်ကျရနေပြီးနိုင်ငံ
တော်ထောက်ပံ့ကြေးကိုအပတ်စဉ်တိုင်း ရနေသူတွေရှိနေတယ်ဆိုပါတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးစာ ရင်းသွင်းပြီး နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ကြေ းရယူနေသူတွေအမည်များကိုလူသိရှင်ကြား ရပ်ကွက်ရုံးရှေ့မှာထောက်ပံ့ကြေးရကြသူများစာရင်းကြေငြာပေးစေလိုပါတယ်
အမှန်တကယ် လက်လုပ်လက်စားနဲ့တကယ့်လက်လုပ် လက်စား ခွဲခြားသိသွားစေချင်လို့ပါနိုင်ငံတော်ရဲ့ထောက်ပံ့ကြေး အစီအစဉ်များတွင်အကြုံးဝင်ပါလျှက်နှင့် အချိန်မှီမရရှိသော်လည်းကောင်း ကလေးသူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းမှုများအပေါ်လည်း
ကောင်း တိုင်ကြားလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ဆက်သွယ်တိုင်တန်းနိုင်ပါသည်
ရသင့္ရထိုက္သူေတြ မရဘဲ ရေနက်သူေတြပဲ ထိပ္ဆုံးက ရေနတာဆိုရင္ တိုင္လို႔ရပါၿပီတဲ့…. ဗ်ာၾကားေနရတဲ့ သတင္းေတြက ဆင္းရဲႏြမ္းပါး လက္လုပ္လက္စားေတြ ကႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အပတ္တိုင္းမရဘဲတစ္ပတ္ျခားစီ အလွည့္က်ရေနၿပီးႏိုင္ငံ
ေတာ္ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုအပတ္စဥ္တိုင္း ရေနသူေတြရွိေနတယ္ဆိုပါတယ္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစာ ရင္းသြင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေၾက းရယူေနသူေတြအမည္မ်ားကိုလူသိရွင္ၾကား ရပ္ကြက္႐ုံးေရွ႕မွာေထာက္ပံ့ေၾကးရၾကသူမ်ားစာရင္းေၾကျငာေပးေစလိုပါတယ္
အမွန္တကယ္ လက္လုပ္လက္စားနဲ႔တကယ့္လက္လုပ္ လက္စား ခြဲျခားသိသြားေစခ်င္လို႔ပါႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္မ်ားတြင္အႀကဳံးဝင္ပါလွ်က္ႏွင့္ အခ်ိန္မွီမရရွိေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းမႈမ်ားအေပၚလည္း
ေကာင္း တိုင္ၾကားလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ဆက္သြယ္တိုင္တန္းႏိုင္ပါသည္
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာစပြီး လမ်းကြောင်းပြောင်း နံပါတ်ပြောင်းပြီးပြေးဆွဲမယ့် YBS များစာရင်း
ကြားသိသူတိုင်း ကြက်သီးထလောက်တဲ့ သီတဂူဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ အလှူတော်
မဆုံးပါးခင် လက်ဝတ်ရတနာတွေကို မဟာမုနိဘုရားကြီးအတွက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မန်းမြို့တော်ဝန် ဇနီး